भारतले दशगजा क्षेत्रमा बनायो बाँध, नेपाली भूमि डुब्ने:: Mero Desh
भारतले दशगजा क्षेत्रमा बनायो बाँध, नेपाली भूमि डुब्ने
Published on: २७ बैशाख २०७७, शनिबार १५:५३
रौतहट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मुलुक लकडाउनमा छ । यही मौका छोपेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित दशगजा क्षेत्रमा बाँध विस्तार गरेको छ । रौतहटको इशनाथ नगरपाकिलासँग जोडिएको नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले पाँच
फिटभन्दा अग्लो बाँध बनाएको छ । यो बाँध अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र प्रचलन विपरित हो । अर्कोतिर यही बाँधका कारण वर्षामा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने निश्चित छ । माटो थुपारेर अग्लो बनाइएको यो दृश्य सामान्य होइन । भारतले दशगजा क्षेत्रमा बनाएको बाँध हो । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकासँग जोडिएको यो क्षेत्रमा दश वर्षअघि भारतले बाँध बनाएको थियो ।यसको कडा विरोधमा नेपाल सरकार उत्रिएन, अहिले संकटको मौका छोपेर नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने गरी भारतले बाँध अग्लो बनाएको छ ।
जंगे पिलर ३ सय ४७ को पूर्व, मझौला पिलर नम्बर ३४६–५ हुँदै बन्जरहासम्मको भूभाग समेटेर बाँध अग्लो बनाइएको छ । स्थानीयले विरोध गरेपनि सरकार नबोल्दा उनीहरु अभिभावक विहिन जस्तै बनेका छन् ।दशगजा क्षेत्र अर्थात ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यो क्षेत्रको ३० फिट वरपर पक्की वा अस्थायी कुनै किसिमको संरचना बनाउन पाइदैन ।
भारतले बनाएको अवैध बाँधले अन्तर्राष्ट्रिय ऐनको मजाक मात्र उडाएको छैन, नेपाल–भारतबीचका सहमतिहरुको पनि उलंघन गरेको छ । अझ नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ ।दुई किलोमिटरभन्दा लामो, १५ फिटभन्दा अग्लो र १० मिटरभन्दा चौडाईको बाँध बनिरहेको छ । पानी निकासका लागि एउटा ढोका समेत राखिएको छैन । सरकारलाई जानकारी दिइएपनि कुनै कदम नचालेको स्थानीय बताउँछन् ।
वर्षा लाग्यो, इशनाथका स्थानीय त्रसित बनेका छन् । वर्षात हुन्छ र भारतले बनाएको बाँधले आफ्नो क्षेत्र डुबानमा पार्ने चिन्ता उनीहरुमा छ ।
भारतको मिचाहा प्रवित्ति कहिले अन्त्य होला ? सरकार ! के नेपालीहरु सधैं डुबानको पीडामा पर्नुपर्ने हो ? रौतहट इशनाथका स्थानीय प्रश्न गर्छन् ।